ओपिडी शुल्क बढाउन ज्ञापनपत्रपछि एनएमए अध्यक्ष डा. कार्कीले भने- सरकारले नबढाए आफ्नो शुल्क आफैं तोक्छौं – Health Post Nepal
ओपिडी शुल्क बढाउन ज्ञापनपत्रपछि एनएमए अध्यक्ष डा. कार्कीले भने- सरकारले नबढाए आफ्नो शुल्क आफैं तोक्छौं
२०७६ फागुन २० गते २०:१४
प्रेस काउन्सिल र चिकित्सक संघबीच १२ बुँदे सम्झौता
चिकित्सकले अस्पतालको ओपिडी टिकट शुल्क वृद्धि गर्न माग गरेका छन् । शुल्क समयसापेक्ष हुनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले आफ्नो छाता संगठनमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
‘हरेक दुई वर्षमा वृद्धि हुनुपर्ने अस्पतालको ओपिडी टिकट शुल्क २०७१ सालदेखि बढेको छैन । त्यतिखेर सरकारले मेडिकल अफिसरको २५० र कन्सल्टेन्टको टिकट शुल्क ४५० रुपैयाँ तोकेको थियो,’ नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)का केन्द्रीय अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले भने, ‘टिकट शुल्क वृद्धि गर्नुपर्छ भन्दै हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ ।’
चिकित्सक संघले ओपिडी टिकट शुल्क ४५० देखि ७५० रुपैयाँ हुनुपर्ने माग राखेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल चिकित्सक संघ, निजी चिकित्सकको संगठन एफिन र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि सम्मिलित शुल्क परामर्श समितिको सिफारिसमा टिकट शुल्क तोक्ने व्यवस्था छ ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री डा. उपेन्द्र देवकोटाको समयमा (करिब डेढ दशकअघि) हरेक दुई वर्षमा टिकट शुल्क तोक्नुपर्ने नियम बनाए पनि अहिलेसम्म कुनै बैठकसमेत नबसेको डा. कार्कीले बताए । ‘ओपिडी टिकटको हालको शुल्क तोक्दा एक किलो खसीको मासु ४५० रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । अहिले पनि हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको महँगीदर हेरेर शुल्क तोक्न सिफारिस गरेका छौँ,’ कार्कीले भने, ‘सरकारले शुल्क नतोकेमा आफ्नो मूल्य आफैँ तोक्छौँ । इन्जिनियर, वकिललगायत अन्य पेसाकर्मीले आफैँ मूल्य तोक्न हुने, हामीले नहुने ?’
आगामी चैतको तेस्रो साता बस्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट शुल्क तोक्ने डा. कार्कीले बताए । यसअघि गत साता पोखरामा सम्पन्न चिकित्सकको राष्ट्रिय भेलामा पनि उनले अब चिकित्सकले आफैँ ओपिडी शुल्क तोक्ने घोषणा गरेका थिए । नेपालबाहेक संसारभरि नै चिकित्सक आफैँले आफ्नो शुल्क तोक्ने व्यवस्था भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले तत्काल शुल्क नतोकेमा आफूहरूले नै ओपिडी शुल्क वृद्धि गर्ने उनले बताए । चिकित्सकहरूले ५ महिनाअघि शुल्क वृद्धि गर्न माग गरेका थिए । त्यसलाई मेडिकल काउन्सिलले पनि स्वीकृति दिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।
सार्क मुलकमै सबैभन्दा कम शुल्कमा नेपालका चिकित्सकले स्वास्थ्यसेवा दिइरहेको दाबी डा. कार्कीको छ । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले एउटा टिकटको ६० डलर तोकेको छ । भारतमा पनि १ हजार ५ सय भारतीय रुपैयाँ छ । भुटानमा त त्यहाँको सरकारले निःशुल्क स्वाथ्यसेवा दिने गरेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘नेपालमा डाक्टरको तलब पनि न्यून छ ।’
अहिले नेपालमा मेडिकल अफिसरको तलब ४० हजार रहेको संघका उपाध्यक्ष डा. विक्रम कार्कीले बताए । हामी एमबिबिएसकै लागि ५ वर्ष लागाएर पढ्छौँ । शैक्षिक शुल्क सरकारले ४२ लाख तोकिदिएको छ । तर, तलब दिन्छ, ४० हजार,’ उनले भने, ‘बिरामी पनि चिकित्सकले मापदण्डको कैयौँ गुणा बढी हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
यही अवस्था रहिरहेमा चिकित्सकहरू पलायन हुने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।
ओपिडी शुल्कमा डाक्टरले कति पाउँछन् ?
निजी अस्पतालमा ओपिडी टिकट शुल्कको निश्चित रकम डाक्टरलाई जाने गर्छ । अस्पताल प्रशासनले पूरै पैसा नदिने गरेको अर्थोपेडिक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।
‘हालको ओपिडी टिकट शुल्क हाम्रो हो । तर, अस्पताल प्रशासनले अन्य सेवाशुल्क देखाएर ६० प्रतिशत मात्र डाक्टरलाई दिन्छन्,’ उनले भने, ‘डाक्टरको तलब समयसापेक्ष छैन ।’ चितवनका अधिकांश निजी अस्पतालले भने टिकट शुल्क ५०० रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।
यसैबीच, नेपाल चिकित्सक संघ चितवनले नयाँ केन्द्रीय समितिलाई स्वागत गरेको छ । ६०औँ नेपाली चिकित्सक दिवसको अवसर पारेर संघले नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूलाई सोमबार भरतपुरमा स्वागत गरेको हो । स्वागत कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की, उपाध्यक्ष डा. विक्रम कार्की, महासचिव डा. बद्री रिजाल उपस्थित थिए । संघको २८औँ कार्यकारिणी समितिको गत माघमा सम्पन्न निर्वाचनबाट डा. कार्कीको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय कार्यसमिति ३ वर्षका लागि निर्वाचित भएको थियो ।
स्वागत कार्यक्रममा सुरक्षित चिकित्सक र न्यायोचित सेवा–सुविधाका विषयमा चिकित्सकबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागी चिकित्सकले मुलुकी ऐनको धारा २३१ संशोधन गर्दै बिरामी र डाक्टरको दूरी कम गर्नुपर्ने बताएका छन् । पछिल्लो समयमा चिकित्सक र बिरामीको दूरी बढिरहेकाले उनीहरूसँग सम्बन्ध बढाउनुपर्ने डा. कालीदास अधिकारीले बताए । उपचारका क्रममा बिरामीको ज्यान गएको खण्डमा ज्यान मारेसरह मानिने कानुन ल्याइएकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउन उनको माग छ ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्यसेवामा योगदान पुर्याएका नेपाल चिकित्सक संघका आजीवन सदस्य डा. ऋषिकान्त अधिकारी र डा. नरेन्द्रकुमार सिंहलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाल चिकित्सक संघ चितवनका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले गरेका थिए ।
Tags: ओपिडी शुल्क, नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)